उफ ! यो राजधानी
Aakar September 02, 2010
काठमाडौँ विरामी भएको छ ! हुन त देश नै बिरामी भइरहेको बेला, काठमाडौँ मात्र बिरामी भनेर लेख्दा सबैलाई पाच्य नहुन सक्छ ! तर साँच्चै काठमाडौँ बिरामी भएको छ ! अनि काठमाडौँ ले नै सारा देश को प्रतिनिधित्व गर्छ, कारण काठमाडौँ मा सबै कुरा छन् । ढल देखि जलसम्म, भिखारी देखि धनाढ्यसम्म, इमानदार देखि नेतासम्म सबै यही काठमाडौँ मा थुप्रिएकाछन् । सबै थुप्रिएको ठाउँमा, म नहुने भन्ने कुरा पनि भएन ! म पनि यही काठमाडौँ मा कतै हराइरहेछु, काठमाडौँ विरामी भइरहँदा पनि, ‘बालै’ भएन भनेर म आफैँ मस्त भइरहको छु ।
‘उपरवाला जब भि देता, देता छप्पड फाडके’ भन्ने हिन्दी चलचित्र ‘हेराफेरी’ को गित निकै सत्य लाग्छ । जब पनि हामीकहाँ समस्या आउँछ, साँच्चै काठमाडौँ ले धान्न नसक्ने गरि नै आउँछ । सायद, समस्या देख्न सजिलो छ तर समाधान उत्तिकै गाह्रो छ ! तर पनि यो आफ्नो मनले समाधान भन्दा समस्या नै धेरै देख्छ !
काठमाडौँ मा थुप्रिएको फोहोरमा पुग्दा एकछिन नाक छोपेर हिँडिदिन्छु, अनि सोच्न थाल्छु खै, कहाँ छ भविष्य ? हामी कता जाँदैछौँ ! एकछिन पानी दर्किँदा रोड मा बाढि आएको छ जमल मा, जमल चोक मै फोहोर को थुप्रो छ ! फोहोर अनि पानी, खै कसरी पो आफ्नो मनलाई बुझाउँ तर पनि मन नलागि नलागि म त्यही फोहोर को बिचमा हिँड्दैछु ! लाग्छ, धत् यो पनि राजधानी हो त ? राजधानी यस्तै हुन्छ त ?
ओखरपौवा को ल्यान्डफिल्ड साइटका बासिन्दा पनि अत्ति नै गर्छन्, कोही बोलेको सुन्छु ! तर पहिले बाचा गरेको प्रतिबध्दता पुरा नगर्ने महानगरपालिका कस्तो, अर्को आवाज सुन्छु, आफ्नो कान मा इयरफोन घुसारिएको भएपनि ! हैन, सहमति पनि गरेछन्, आजदेखि फोहोर उठाउने भनेर, तर बेलुकै अर्को समूह आएर अरु मागहरु तेर्साए रे ! हे भगवान्, यी मान्छेहरु पनि किन यस्ता अराजक भएका हुन् – अर्को आवाज सुन्छु ! सोच्छु, साँच्चै हामी किन अराजक बन्दैछौँ ? ती नेताहरु त बिग्रिए, हामीलाई बिगारे, तर हामी किन फेरि अराजक बन्दैछौँ ! काठमाडौँ को फोहोर व्यवस्थापन को जिम्मा त हामी जनताहरु को पनि हो, हैन र ? हामी किन धारे हात लाएर महानगरपालिकालाई सराप्छौँ ? अब गाडि लानै नदिएपछि, बिचरो महानगरपालिका ले के गरोस् ? नाम मात्र महानगर भएर के गर्नु, महानगर अनुसार को कुनै सुविधा छैन ! न धारा मा पानी आउँछ, न सडक मा जाम खूल्छ, न त काठमाडौँ को फोहोर नै उठ्छ ! आफ्नो मन मै दुविधा हुन्छ, मलाई दुबै कुरा ठिक लाग्छ !
अनि लाग्छ, यो कुरा यत्तिकै मिल्नेवाला छैन ! हामी ले यही फोहोर को डंगुर भित्र बाँच्न सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ ! गाडि ले पछाडि बाट हरन लाउँदा झसंग हुन्छु, म बाटो को बिच बाट हिँडिरहेको छु । बल्लतल्ल महानगर ले, केही ठाउँमा आकाशे पुल बनाइदिएको छ, तर त्यो पुल बाट म बाटो काट्दिन, कारण म अराजक भएको छु, अनि मलाई लाग्छ म सारा नेपाली जनता को प्रतिनिधित्व गर्छु ! कहिँ एक्सिडेन्ट भयो भने, बाटो बन्द गर्छु, टायर बाल्छु, सरकारलाई सराप्छु प्रधानमन्त्री चयन नगरिएको भन्दै, भारतलाई सराप्छु, मिडियालाई सराप्छु, साँच्चि म राम्रो त देख्नै छाडेको छु !
काठमाडौँ विरामी भयो भन्दैछु तर सायद म बिरामी भएको हुनसक्छु ! गज्याङ गज्याङ फोहोर, घन्टौँ को ट्राफिक जाम, साँच्चै म बिरामी पर्दैछु ! हिँड्दा हिँड्दै, निधार छाम्छु, निधार तातो जस्तो लाग्छ, सायद म बिरामी भएँ ! तर जति पनि पाइला बढाउँछु, म काठमाडौँ को समस्या को बारेमा सोचिरहेको छु, समाधान मलाई पनि थाहा छैन ! तर जब पनि काठमाडौँ को बारेमा सोच्छु, भित्र मन मा चसक्क घोचे झैँ हुन्छ !
संविधान सभा को भवनलाई देख्छु तर मेरो मन मा संविधानसभा एकादेश को कथा भइसक्यो ! खै प्रधानमन्त्री छान्न को लागि कति पटक निर्वाचन भयो थाहा छैन, कारण अब मलाई ति कुराहरु को वास्ता लाग्न छोडेको छ ! मैले त्यसविषय को समचार पढ्न र हेर्न छाडिसकेको छु ! रियल जुस मा ‘लेदो’ भेटिएको समाचार पत्रिकाले लेख्न थालेपछि, रुष्ट भएको भारतिय दुतावास ले ‘डाबर’ कम्पनि को प्रवक्ता को काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि आम जनमानस मा फैलिरहेको छ ! प्रकाशन गृह र दुतावास विच जुहारी चलिरहेको छ ! राजनिति मा मात्र हस्तक्षेप गर्दै आएको, दुतावास ले समाचार कै विषय लिएर प्रकाशन गृहमाथि पनि फुट को राजनिति गरिरहेको छ, गाँइगुँइ यस्तै हल्ला चल्दैथियो, वानेश्व चोक को चिया पसल मा पानी छल्न केही बेर रोकिँदा !
फोहोर, अभाव र हाहाकार कै बिच पनि, हिजो डाबर नेपाल को प्रायोजन मा मिस नेपाल छानियो, त्यही खबर कति पत्रिका का आज का हेडलाइन भएछन् तर एउटा दैनिक ले त छोटकरी समाचार सम्म दिएन भने पछि, कुरा धेरै गम्भिर भइसकेको झैँ लाग्दैछ, यो बिरामी काठमाडौँ मा अर्को अनिष्ट देखिएको छ !
यसै समय मा पारश र हिमानीका खबरहरु पनि छाइरहेकाछन् काठमाडौँ मा ! खै, म बुझ्न सकिरहेको छैन, के हुँदैछ यहाँ, अनि के हुनेछ यहाँ ? राजनैतिक गतिरोध र अन्यौलता, नेता का र पार्टि का नेता को नाम सुन्यो भने पनि झनक्क रिस उठेर आउँछ, उनीहरुको काम गराइ का कारण ! संविधानसभा, राजनिति, फोहोर, ढल,भारतिय दुतावास, प्रकाशनगृह ! एउटा लडदा अर्को यहाँ हाँस्ने बानि पुरानै हो तर यो मिडियाहरु को सन्दर्भ मा आफैँलाई अचम्म लाग्यो, किन यिनीहरु आपसमा “पितपत्रकारिता” गर्छन्, विदेशीलाई रिझाउन को लागि ?
तल ‘एमाले’ को मुखपत्र ले कान्तिपुर को बारेमा छापेको समाचार हेर्नुस् !
काठमाडौँ को फोहोर खै,मैले वास्ता गर्न छोडिदिँए ! देशमा प्रधानमन्त्री होस् कि नहोस मलाई ‘बाल’ हो ! राकेश सुद को भो कुरा नगरौँ ! नेपाली मिडिया को अन्तरंग मलाई थाहा छैन ! जाम त सँधै यस्तै हो ! खानेपानी, आउँछ नि हप्ता मा मज्जा ले एकपटक ! पूर्व पश्चिम मा बाढि गयो रे, यही जमललाई त बाढि बाट बचाउन सकिएको छैन भने, सुदुर गाउँहरु को कुरा सोच्नु पर को कुरा हो !
समस्या मात्रै देखाउँदा निराशावादी लाग्नसक्छ तर खै, आशा गर्ने ठाउँ पनि त छैन ! मिडास सफ्टेक भइरहेको छ, लोकस हुँदैछ अनि केयु आइटि मिट पनि हुने तरखर मा छ ! इन्फरमेसन टेक्नोलोजीका पारखीहरु हौसिएका छन् । अस्ति यस्तै युवा समूह ले काठमाडौँ बारक्याम्प को आयोजना गर्यो, अब सफ्टवेयर फ्रिडम डे आउँदैछ ! साँच्चै हामी कति धेरै नयाँ कुराहरु देख्छौँ, कति नयाँ कुराहरु सुन्छौँ ! यही काठमाडौँलाई व्यवस्थित गर्ने कति धेरै आइडियाहरु निस्कन्छन् ! कति धेरै प्रविधि विकास गरिरहेका छन्, नेपाली युवा वैज्ञानिकहरु ! कोही फोहरलाई मोहर बनाउनलागेका छन् ! जब पनि त्यस्ता कार्यक्रम मा जान्छु, म हामी सारा नेपाली को भविष्य उज्वल देख्छु तर त्यो एकछिन को सपना झैँ बन्न पुग्छ, कारण त्यो आवाजहरु बाहिर निस्किँदैनन्, निस्किएपनि सम्बन्धित पक्ष ले भन्छ, यसको लागि त कानुन नै बनेको छैन !
Unknown September 2, 2010 at 10:49 PM
अरु कुरो राम्रो छ .. पहिलो paragraph म "फटाहा देखि नेतासम्म" भन्नु भन्दा "इमान्दार देखि नेतासम्म " भनेको भा मिल्थ्यो जस्तो लाग्यो.. :P
Basant Giri September 3, 2010 at 12:12 AM
यो काठ्मान्डु दश बर्ष अघि पनि यस्तै थियो। आज पनि त्यस्तै छ। तत्काल परिवर्तन हुने छांट कांट अझै देखिदैन।
Aakar September 3, 2010 at 12:20 AM
मैले साधना दिदी को कुरालाई मानेँ है !
Dilip Acharya September 3, 2010 at 9:04 AM
खै, यस्तै छ राजधानी, वा अझ राम्ररी भन्दा यस्तै बनाइएको छ राजधानीलाई ।
कान्तिपुरले मिस नेपालको खबरलाई त्यस्तरी उपेक्षा गर्नु र 'बुधबार' मा माथिको समाचार छाप्नु ले भने 'दाल मे कुछ काला हे' भन्ने हिन्दी उखान याद दिलाएको छ ।
एउटा देशको कुटनैतीक नियोग कुनै कम्पनीको खेताला नै बन्ने र अर्को प्रकाशन गृहले भने एउटा 'इभेन्ट' लाई 'पवक्ता' सँगको दुस्मनी का कारण आफ्नो छापामा ठाउँ नै नदिने । लौ, यस्तै रहेछ :)
Sweta September 4, 2010 at 1:23 PM
You represent the feeling of young arrogant ( in positive sense) Nepali youth...really Kathmandu is representative of the whole nation...while Ktm is in problem we can assume that the whole nation is in crisis..So many problems are here...I remember an intellect saying that "If one seriously think of the problems of this nation then he will suffer from heart-attack immediately". This is the condition..
However, like you are hopeful in your writing about youth in technology , I am also hopeful towards so many other things...
Kathmandu is in real chaos...the incessant rainfall and the garbage everywhere, the road like rivers and the holes in the roads...just it is really getting over my head..
However, we can still hope...hope never dies..
Sweta November 12, 2010 at 4:01 AM
नयां लाउरे (Naya Laure) November 12, 2010 at 4:01 AM